Shaqada waxbarashadaada ka dib
Barta ugu wanaagsan oo laga heli karo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan shaqooyinka iyo xiradda, saadaasha shaqooyinka, iyo waxbarashada ay uga baahan yihiin xafiiska Adeegyada Shaqada Dad-weynaha Swedish. Boggooda, http://www.arbetsformedlingen.se/, waxaa ku qoran macluumaad badan oo waxtar u ah baaritaanka macluumaadka shaqooyinka iyo shaqsiyaadka shaqo raadiska ku jira. Bogga studera.nu waxaad ka heli kartaa macluumaad ku saabsan saadaasha suuqa ee barnaamijyada waxbarasho ee dhowr ah.
Haddii waxbarashada aad ku soo dhammaysay wadan kale, waxaa kuu qiimayn kara Guddiga Tacliinta Sare ee Swedish. Haddii waxbarasho jaamacad aad ka dalbatay wadankan Sweden dhexdiisa, buundooyinkaaga duga sare iyo waxbarashada sare waa la qiimayn doonaa marka la eegayo xaq u yeelashadaada in aad qaadan karto koorsooyinka ama barnaamijyada aad dalbanayso. Sidoo kale waxaad dalban kartaa qiimayn gooni ah ee aqoontaada shaqo aad raadinayso darteed. Qiimaynta waa mid muhiim u ah adiga iyo shirkadda aad ushaqayso goorta aad dalbanayso shaqada. Marka laga hadlao xirfaddaha u baahan Macluumaad dheeraad ah waxaa ka heli ka heli kartaa bogga internetka ee Guddiga Tacliinta Sare ee Swedish www.uhr.se.